फिल्म दुई नम्बरी, छायांकन पनि रोकियो
असार २६, २०७७ ०५:५८:२४
चैत्र १०, २०७६ बागमती खबर
कास्कीको घाचोकमा छायांकन भइरहेको फिल्म ‘दुई नम्बरी’ को छायांकन रोकिएको छ । कोरोना प्रभावका कारण फिल्मको छायांकन स्थगित गरिएको निर्देशक दिपेन्द्र लामाले बताए ।सबैको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै र कोरोना त्रास नफैलोस् भनेर सचेत बनेका हौं,’ उनले भने ।
फिल्ममा पल शाह र वर्षा शिवाकोटीको पनि शीर्ष भूमिका रहनेछ । ‘दुई नम्बरी’ बाट नेपाली रजतपटमा भुटानी नायिका उगेनले डेब्यु गरेकी छिन् । सम्पूर्ण छायांकन पोखरामा गरिने भनिएको यो फिल्मको ३५ दिनमा शूटिङ सकाइने योजना थियो । अब भने कोरोना त्रासका कारण फिल्मको छायांकन पछि धकेलिएको हो ।
रोहित कट्टेल र सरोज नेपालीले निर्माण गरेको यो फिल्ममा रत्न श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता छन् भने किरण नेपाली प्रस्तुतकर्ता छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र १०, २०७६, ०१:०३:००
'अमेरिकन आइडल'को टप २० मा पुगे नेपाली युवा
अमेरिकन आइडलमा छानिए नेपाली युवा (भिडियोसहित)
गायक पशुपति शर्माले ल्याए नयाँ गीत ‘जता पनि चोर’
माघ २६, २०७६ बागमती खबर
'चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल' मकवानपुर शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएकोक छ। आज सम्पन्न चौथो अधिवेशनले नौं सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । अधिवेशनले मणिराज गौतमलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। त्यस्तै उपाध्यक्ष कपिल खड्का, सचिव श्रीराम अर्जुन दाहाल, सह-सचिव रविन्द्र गौतम, कोषाध्यक्ष चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा सन्नु रिजाल, दर्शन क्षेत्रि, अमृता पराजुली र दिपक सिंह रुम्बा सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । कार्यक्रम बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो। चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार राई, केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्र महर्जन,नेपाल चलचित्र पत्रकार संघका महासचिव अनिल यादव, प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रताप विष्ट लगायतको उपस्थिति थियो । पुरा पढ्नुहोस्
रिमाको प्रश्न: ‘नागरिकलाई सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी' ?
माघ ७, २०७६ बागमती खबर
गायिका आस्था राउतको विमानस्थल प्रकरणमा कलाकर्मीहरुले मुख खोल्न थालेका छन् । केही दिनसम्म मौन बसेका कलाकार्मीहरु अहिले सामाजिक संजालमार्फत अगाडि आएका हुन् । यही क्रममा नायिका तथा मोडल रीमा विश्वकर्माले पनि आस्था राउत प्रकरणमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले, नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा सास्ती दिन खोज्ने प्रहरी कसरी मेरो साथी हुनसक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरेकी छिन् । रीमा लेख्छिन्–‘देशमा दिनानुदिन जघन्य अपराध घटिरहँदा अनी ठूला अपराधी रिट र तारिखमा खुलेआम हाम्रै वरपर घुमिरहँदा त्यसै त हामी असुरक्षित छौं । अझ, विमानस्थलको सामान्य नोकझोकलाई लिएर नागरिकविरुद्ध मुद्दामा ओर्लिएको प्रहरी संगठनले आम नागरिकमा प्रहरी प्रशासनमाथि विश्वास भन्दा बढी डर पैदा गरेको छ ।’ पुरा पढ्नुहोस्
मकवानपुरमा भारी बर्षा, सचेत रहन प्रहरीको आग्रह असार २५, २०७७ 1339